Guddoomiyaha KMG ah ee Barlamaanka Koonfur galbeed oo la doortay – Radio Daljir
Guddoomiyaha KMG ah ee Barlamaanka Koonfur galbeed oo la doortay
Maarso 26, 2020 11:48 b 0
Magaalada Baydhabo ee xaunta Gobolka Baay waxaa Maanta kulan ku yeeshey Guddiga diyaarinta doorashada Guddoonka Baarlamaanka Koonfur Galbeed,iyaga oo kulankooda ku doortey Guddoomiye iyo kuxigeenkiisa.
Kulanka oo uu shir guddoomiyey guddoomiyaha KMg ah ee Baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa Xubnaha Guddiga oo ka kooban 15 xubnood oo laga soo kala xuley ayaa waxaa ay Guddoomiye u doorteen Cismaan Buule Macalin, Guddoomiye kuxigeen loo doortey Shukri Cumar halka Xoghayaha guddiga loo doortey Xildhibaan Eng Ibraahim.
Sidoo kale Xubnaha Guddiga ayaa dhexdooda waxaa ay iska soo xuleen Shan Xubnood oo ah guddi hoosedyo,kuwaas oo Guddiga u qaabilsan dhinaca Maaliyadda.
Guddoomiyey guddoomiyaha KMg ah ee Baarlamaanka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Nuur (Albaro) ayaa sheegay in Guddiga uu horyaalo qaban qaabada doorashada guddoonka Baarlamaanka iyo diiwaangelinta musharixiinta iyo howlo kale.
Baraarugga Haweenka – Taxanaha 43aad (Xaawo Axmed Maxamed (dhegayso)